50 arimood oo lagu gaaro guur farxad leh. Qaybta 3-aad | Somaliska
Waxaan halkaan ka sii wadeynaa qeybta 3-aad ee mowduuca aan ugu magacdarnay 50 arimoodoo lagu gaaro guur farxad leh. Qaybtii hore waxaan ku soo bandhignay 20ka ugu horeeya arimaha lagu gaaro guur farxad leh.
21. Ha u qaadan jacaylka mid aad soo iibsatay: Guurka ku dhisan jacaylka waa midka ugu qiimaha badan aduunka balse lama doonayo lamaanuhu in uu u qaato in jacaylka la jecelyahay dartiis uu waxkasta sameyn karo, ama in aan lagaa maarmin. Jacaylku waa dhamaadaa sida biyaha haraha ku jira oo kale haddii la dhameeyo. Hadaba ha iska dhamayn jacaylka lamaanahaaga ee tixgalin, kobcin iyo daryeel samee.
22. Noqo tusaale wanaagsan: Haddii aad dooneyso in lamaanahaaga uu yeesho dabeecado wanaagsan ama uu sameeyo ficilo wanaagsan, waxaa muhiim ah in aad adiga iska bilowdo. Waa in aad noqotaa tusaale, haddii aad ka dalbato lamaanahaaga wax aadan adiguba sameyn, taasi waxay noqoneysaa kala hadal. Waxaa tusaale loo qaadan karaa, ragga qaadka cuna, oo aan dooneyn in xaaskooda ay cunto. Haddii adiga aad sameyso ficilka, maxaa ugu diideysaa lamaanahaaga? Muhiimadu waa in aad noqoto tusaalaha wanaagsan ee reerkaaga.
23. Waalidka: Ha siinin hogaanka reerkaaga waalidkaa, inkastoo ay waalidku xaq kaa mudanyihiin macnaheedu mahan in ay maamule ka noqdaan xiriirka ka dhexeeya adiga iyo lamaanahaaga.
24. Guurku waa in aad akhbasho masuuliyadaada iyo in aad u samirto culeysyada. Marka aad guursato waa in aad ogaataa in masuuliyad ka badan midii hore ay ku saarantahay.
25. Ha bahdilin lamaanahaaga, qaasatan marka ay idinla joogaan dad kale, ha noqon mid soo bandhiga xumaanta lamaanahaaga.
26. Ka dhig nolosha qowskaaga mid farxadi ku dheehantahay adiga oo la sameynaya waxyaabo xiiso leh, sida in aad booqasho wada sameysaan ama aad wada qabataan waxyaabaha aad ku raaxaysataan ama idin xiiso galiya.
27. Noqo dhageyste wanaagsan, xaaskaaga markii ay haleyso waa in aad dhageysataa cabashooyinkeeda. Dhageysiga wanaagsan waxa uu abuuraa isfahan.
28. Ninku waa in uusan iloobin masuuliyada dhaqaalaha ee ka saaran xaaskiisa. In aad daboosho baahida xaaskaaga waa masuuliyad ku saaran. Xaaska waxaa laga doonayaa in aysan noqon mid gacanta iska taagata oo keliya balse ay noqoto mid wax soo kordhisa, oo la socota xaalada dhaqaale ee ninkeeda. Waa in aadan saarin ninkaaga culeys uusan ka bixi karin.
29. La wadaag lamaanahaaga farxada iyo qosolka. In aad ka sheegeyso waxyaabaha niyad jabka ah waxaa ka wanaagsan in aad ka wadasheegeysataan waxyaabaha qosolka iyo kaftanka keeni kara.
30. Asxaabtaada ha u ogolaan in ay guurkaaga lug ku yeeshaan. marka aad la joogto noqo mid aan miiska soo saarin guurkiisa. Afaaraha qoyskaaga haka dhigin mid qofkasta ogaato. Waa in aad dhowrtaa sirta reerkaaga. Go’aamada ku saabsan guurkaaga haka qeyb galin asxaabtaada.
La soco qeybta 4-aad.
sxb ad ad u mahadsantahay arimahaan ad soo gudbise marka waxaan kaa codsanenaa ayagoo dhameestitan waadna mahad santahay jimcale
sc jimcaale walaal aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay
asc aad ban u mahadsamtahay waa wax loo bahaaanyahay lakin intii aan jaceelka aan wax ka aqoona ileen waxa jira kuwa aan aqoon jaceel waxan dhihi lahay raxmad dhaxdooda ha dhigo amiiiiiiiiiiiiiiiiin
asc jimcaale run ahaantii fikirkaan aad ayaa loogu baahnaa waayo rag badan iyo dumar badan ayaa ka faa ideystay arintaan
xamdi abdulqaadir says:
aniga waxas ma aqaano weligey wax ijecel ma arag guur kulahaa kkkkkkk
war maxaa guur ah ceerta ayaa lala dhuumanayaa xagee laysku aamini
dumarka waxa aay raad shaan nin ay islayyihiin wax waad kaqaadi kartaa ama wax wuu haystaa ..
rakiina sidaas ookale ayay samaynayaa marka halays aamino